Inverquark zvemichina kunokudziridzwa ne Aquark Electric Ltd. Pashure pemakore kukura uye tsvakurudzo, muna 2017, anoshamisa Inverquark michina akanga zvinobudirira raparurwa kudziva indasitiri. Ndicho zvikuru vakanyarara & simba rokuponesa inverter dziva kudziyisa mhinduro. Its chikuru zvinokwaniswa vari stepless DC Inverter, nemamwe inverter dziva kudzora maitiro uye kudzivirirwa akangwara.
Inverquark kuti makirisito zvemichina ndiyo stepless DC inverter. It adopts stepless inverter compressor uye DC brushless feni injini. Nokukurumidza inogona kugadziridzwa chimwe Hertz nomumwe Hertz uye rimwe kumativi nomumwe kumativi, iro rinopa zvinoshamisa simba rokuponesa kuita uye hwakanyanya runyararo.
Inverquark kudzorwa gadziriro iri zvikuru akagadzirirwa dziva kudziyisa. Inogona kuchinja kudziyisa vanokwanisa chaizvo maererano zvakasiyana kudziyisa kurasikirwa mudziva mwaka. Magadzirirwo uzivi ndiko kuzadzisa zvakasimba kudziyisa nemupristi nokukurumidza pakutanga mwaka, uye nani simba kukuponeswa mune vamwe mwaka kubudikidza yakaderera chaizvo.
Inverquark anogona kuchinja kwazvo voltage uye kuchinja maitiro akasiyana oma ezvinhu. Somuenzaniso, kana paine magetsi yepamusoro kana murombo kufefetedza, kuti hurongwa anogona sipidhi noungwaru kuti akasununguka kushanda. Saka, kunoita refu upenyu hupfupi pane chinyakare pamusoro / kure kupisa pombi.